Kulo nyaka balekela eTeruel noma eVerona ngoSuku Lwezithandani ngothando lwakho | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Ukuphunyuka eYurophu, General, Ezothando
Izwekazi elidala laqanjwa ngokuhlonipha indodakazi enhle yenkosi yaseFenike u-Agénor, owakhohliswa nguZeus futhi waba yindlovukazi yokuqala yaseKrethe ngemuva kokuthi lo nkulunkulu ethandane naye. Kusukela emsukeni wayo, iYurophu iye yaxhunyaniswa nezothando ngale nsumansumane nangokuba yisizinda sezindaba ezithile zothando nezithandwayo ezincwadini.
Ngalezi ziqinisekiso, Manje njengoba usuku lukaValentine selusondela, kungaba umqondo omuhle ukuthatha uhambo lokubalekela kwezinye zezindawo ezithandana kakhulu nezwekazi, njengeVerona (Italy) noma iTeruel (Spain). Zombili lezi zimo zezindaba zothando ezimbi ezifana naleyo kaRomeo noJuliet ngakolunye uhlangothi naleyo ka-Isabel de Segura noDiego de Marcilla ngakolunye uhlangothi. Ungakwazi yini ukuhamba nathi?
1 Usuku lwezithandani eVerona
2 Usuku lwezithandani eTeruel
Usuku lwezithandani eVerona
UShakespeare ukhethe leli dolobha njengendawo yokuhlelwa kwenhlekelele yothando edume kunayo yonke: URomeo noJuliet, abathandi abasha abavela emindenini emibili yezitha.
Ngesikhathi sikaValentine, imigwaqo nezikwele zedolobha kugqokiswe izimbali, amalambu abomvu namabhaluni amise okwenhliziyo ukwenza amakhulu emibhangqwana evela emhlabeni wonke ichithe usuku olungasoze lwalibaleka. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela izindlu zabathandi, ngokungena mahhala kuJuliet phakathi noSuku Lwezithandani. Kuyisigodlo se-Gothic sekhulu le-XNUMX esinompheme odume kakhulu owaziwa ngeJuliet's Balcony, osuphenduke isimanga esikhulu sezivakashi. Lapho umncintiswano "u-Amada Julieta" uhlelwe lapho kunikezwa khona incwadi yothando kakhulu.
Futhi ePlaza dei Signori, kuhlelwe imakethe yezandla okwenziwa amadokodo abo ahlelwe ngendlela ekhethekile yokuthola inhliziyo. Lapho ungathola isipho esifanelekile somlingani wakho futhi wenze lokhu kuhlala kuyimemori engacimekiyo. Njengokungathi lokho bekunganele, kuzobuye kube nemibukiso ye-pyrotechnic, amakhonsathi, izingoma zezinkondlo, imidlalo yaseshashalazini nemibukiso engeza umlingiswa wamasiko ocingweni olunikeza abathandi umuzwa oyingqayizivele.
Njengamanje, uVerona uzama ukwethula iphrojekthi efana neMishado ka-Isabel de Segura eTeruel, yokubandakanya iVeronese ekwakhiweni kabusha komlando weRomeo noJuliet futhi ngaleyo ndlela ikhuthaze ezokuvakasha ngisho nangaphezulu.
Usuku lwezithandani eTeruel
Kusukela ngo-1997 leli dolobha liphindelela ngoFebhuwari indaba yothando ebuhlungu kaGeorge de Marcilla no-Isabel de Segura ngesikhathi soSuku Lwezithandani. Izinsuku ezimbalwa, uTeruel ubuyela emuva ngekhulu le-XNUMX futhi izakhamuzi zakhona zigqoke izingubo zasendulo futhi zihlobisa isikhungo somlando wedolobha ukumela inganekwane. Lo mkhosi, owaziwa ngokuthi iMishado ka-Isabel de Segura, uheha izivakashi eziningi minyaka yonke.
Kuhlelwe imisebenzi eminingi edolobheni lase-Aragonese ngalo mkhosi. Okuvelele kakhulu kulo nyaka yi-opera eyenziwe yiLos Amantes de Teruel, ezodlalwa esontweni elihle laseSan Pedro, okungesinye sezindawo zokuqala emlandweni walaba bathandi.
Umculo uzobe uphethe uJavier Navarrete (owine i-Emmy Award waqokelwa iGrammy ne-Oscar) kanti i-libretto izosekelwa emibhalweni yangezikhathi zasendulo kanye nenkolo yobuKrestu. Isiteji sizoba sincane kepha sibe namandla.
Kuzoba nemakethe yemikhiqizo ejwayelekile nobuciko, amakhonsathi noma imidlalo yeshashalazi ukuletha ukuthinta kwamasiko kulo mcimbi.
Inganekwane yabathandi, eyaqala ngekhulu le-1555, inezimpande zomlando. Ngo-XNUMX, phakathi neminye imisebenzi eyayenziwa esontweni laseSan Pedro, kwatholakala izidumbu zomuntu wesilisa nowesifazane ababengcwatshwe emakhulwini amaningi eminyaka edlule. Ngokomqulu owatholwa kamuva, lezo zidumbu kwakungezikaDiego de Marcilla no-Isabel de Segura, ezabathandi baseTeruel.
U-Isabel wayeyindodakazi yomunye wemindeni ecebe kakhulu edolobheni, kanti uDiego wayengowesibili ezinganeni zakwabo ezintathu, ngaleso sikhathi ezazilingana nokungabi namalungelo wefa. Ngalesi sizathu, ubaba wentombazane wenqaba ukumnika isandla kodwa wamnika isikhathi seminyaka emihlanu ukuze enze imali futhi afeze inhloso yakhe.
Ibhadi lenza ukuthi uDiego abuye empini enengcebo ngosuku okwaphela ngalo leli gama futhi u-Isabel washada nenye indoda ngokwakhiwa kukayise, ekholelwa ukuthi ushonile.
Isulile, le nsizwa yamcela ukuthi amange okokugcina kodwa wenqaba njengoba ayeshadile. Ibhekene nokushaywa okunje, le nsizwa yawa yafa ezinyaweni zayo. Ngakusasa, emngcwabeni kaDiego, intombazane yaphula umthetho futhi yamanga ukuthi wayemphikile empilweni, wavele wawa phansi wafela eceleni kwakhe.
Kokubili iTeruel neVerona bayingxenye yomzila we-Europa Enamorada, inethiwekhi yaseYurophu ekhuthazwa idolobha laseSpain edinga amadolobha angamalungu (iMontecchio Maggiore, iParis, iSulmona, iVerona noma iTeruel) ukuthi inganekwane yothando ebekwe edolobheni isaphila namuhla ngenhlangano ethile yezenhlalo noma yezemfundo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Kulo nyaka balekela eTeruel noma eVerona ngoSuku Lwezithandani ngothando lwakho
Izindlela ezi-3 zamasiko nezokuvakasha eSpain zango-2017